DAAWO SAWIRO:- Ciidamada Booliska maamulka Jubbaland oo gacanta ku dhigay Rag ka Ganacsada Mandooriye – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDAAWO SAWIRO:- Ciidamada Booliska maamulka Jubbaland oo gacanta ku dhigay Rag ka Ganacsada Mandooriye
Hiiraan Xog, Ciidamada Booliska maamulka Jubbaland ayaa soo bandhigay Laba nin oo ay sheegeen inay ku soo qabteen ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya, islamarkaana ay soo gelinayeen magaalada gudaheeda.
Raggan ayaa soo qabashadooda waxa ay ka dambeysay kadib markii ciidamada Booliska ay hawlgal gaar ah ka sameeyeen agagaarka Xeebta magaalada Kismaayo, taasi oo suuragelisay in gacanta lagu soo dhigo.
Sawirro laga soo qaaday raggan ayaa waxa ay muujinayeen iyaga oo fadhiya goob fagaare ah, islamarkaana ay horyaalaan maandooriyihii lagu soo qabtay oo ku jira baco madow.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Jubbaland Jaamac Axmed Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay raggan in hada ay ku jiraan gacanta ciidamada ammaanka, sidoo kalena dhawaan la qorsheynayo in la horgeeyo sharciga.
“Waa wax loogu tala galay dhaqanka in lagu dooriyo, waa wax loogu tala galay ummada in lagu halaago, raggan sharciga ayaa la horgeyn doonaa, waxaan halkan digniin uga dirayaa inay ka digtoonaadaan dadka waxyaabahan oo kale ka ganacsada”. Ayuu yiri Jaamac Axmed.
Booliska Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan hawlgalada nuucaan oo kale ah, horey sidan oo kale ciidamada ayaa gacanta ugu dhigay rag ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya.